निराहार सत्यग्रह र डाक्टर गोविन्द केसी - Malayakhabar
होम पेज समाज निराहार सत्यग्रह र डाक्टर गोविन्द केसी
निराहार सत्यग्रह र डाक्टर गोविन्द केसी
हामी सबैले भोक हड्ताल वा निराहार सत्याग्रहबारे सुनेका छौँ, अझ कैयौँले त यस प्रकारका विभिन्न आन्दोलनमा ऐक्यबद्धतासमेट प्रकट गरेका छौँ । हाल डा. गोविन्द केसीले आफ्नो १९औं सत्याग्रह सुरु गर्नुभएको छ भने उहाँलाई सत्याग्रह गर्नबाट रोक्न वा तोड्न लगाउन सरकार तथा प्रशासनबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दबाब पनि आइरहेको छ ।
स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार तथा आम सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरूमा सुधारका माग राख्दै आउनु भएका डा. केसीको सर्वसाधारणबाट भने निकै नै सराहना हुने गरेको छ । डा. केसीले १९ पटकमा जम्मा २ सय ३० दिन निराहार सत्याग्रह बसिसकेको अवस्था छ । त्यस्तै केही समयअघि सामाजिक अभियन्ता इनफ इज इन अफ्का सहयोगीहरूले कोभिड १९ रोकथाम तथा क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूको सुधारमा नेपाल सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन माग राख्दै दुई चरणमा सत्याग्रह गरेका थिए ।
द्वन्द्वकालमा मारिएका छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको न्यायको लागि नन्दप्रसाद अधिकारी र उनकी श्रीमती गंगामायाले पनि धेरैपटक भोक हड्ताल गरिसक्नु भएको हो । नन्दप्रसाद अधिकारीको न्यायको खोजीमै मृत्यु भयो भने गंगामाया अधिकारी आजसम्म वीर अस्पतालमा आन्दोलनरत नै हुनुहुन्छ । तर विरोधको विषय तथा प्रभावकारीतालाई पर राख्दै यहाँ निराहार सत्याग्रहको बारेमा चर्चा गरिनेछ ।
भोक हड्तालको सुरुवात कसरी कहाँबाट कसले ग¥यो, निराहार बस्दा सत्याग्रहीलाई कस्तो शारीरिक तथा मानसिक असर पर्दछ भन्नेबारे हामीलाई धेरै थाहा नहुन सक्छ । भोक हड्ताल कहिलेदेखि कसले सुरु ग¥यो भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैसँग छैन । तर यसको प्रयोग धेरै अघिदेखि भएको देखिन्छ । आयरल्याण्डमा प्राचीनकालदेखि नै पीडित व्यक्तिले आफूमाथि अन्याय गर्ने व्यक्तिको घरदैलोमा बसी न्यायको खोजीमा भोक हड्ताल गर्ने गरेको पाइन्छ । तत्कालीन समयमा न्यायिक प्रणालीअन्तर्गत नै यस किसिमको विरोध गरिन्थ्यो भने पीडित व्यक्तिको यदि मृत्यु भएमा पीडकले मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने हुन्थ्यो ।
त्यस्तै किसिमको हड्ताल पौराणिक कालमा भारतमा पनि गरिन्थ्यो भनिन्छ । रामायणमा समेत यस किसिमको विरोधको व्याख्या पाइन्छ । जब रामले १४ वर्षे वनबासमा जानुपर्ने भयो, उनका भाइ भरतले राम नफर्कुन्जेलसम्म राजगद्दी सम्हाल्ने भए । तर, एक सर्त थियो ः १४ वर्ष सकिनासाथ राम फर्केर राजगद्दी सम्हालेनन् भने उनले निराहार रही आत्मदाह गर्ने । भारतमा यस्तो प्रथा पछिसम्म रहृयो र यसलाई धर्ना भनिन्थ्यो । न्यायको खोजीमा प्रयोग गरिने यस प्रथाको सन् १८६१ मा कानुनी रूपमै अन्त्य गरियो ।
२०औं शताब्दीमा भोक हड्तालको प्रयोगबाट ठूलाठूला सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । आयरल्याण्डमा सन् १९१६ को इस्टर राइजिङपछि हिरासतमा रहेका केही बन्दीहरूले आफूलाई राजनीतिक बन्दीको मान्यता दिनुपर्ने मागसहित बेलायती सरकारको विरुद्ध भोक हड्ताल गरे । १९१६ देखि सुरु भएको यस विरोधको क्रममा थोमस एस, टरेन्स मिक स्वाइनीलगायतले लामो भोक हड्तालको क्रममा मृत्युवरण गरे । १९२३ मा त ८ हजारभन्दा बढी कैदीहरूले भोक हड्ताल गरे ।
पछि १९८१ मा बबि स्यान्ड्स नामक कैदीले ९ जना अरू कैदीहरूसहित गरेको भोक हड्ताल भने इतिहासमै महŒवपूर्ण मानिन्छ । स्याण्ड्सले यस विरोधको क्रममा जेलबाटै सांसदको उम्मेदवारी दिए र जिते पनि तर उनको विरोधको क्रममै मृत्यु भयो । उनीसँगै यस सत्याग्रहमा अरू ९ जनाले पनि ज्यान गुमाए । तर, उनीहरूलाई बेलायती सरकार र तत्कालीन प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले सामान्य अपराधीभन्दा माथिको मान्यता कहिल्यै पनि दिएनन् ।
भारतमा महात्मा गान्धीले अहिंसात्मक असहयोगको आन्दोलनमार्फत बेलायती शासनबाट भारतलाई स्वतन्त्र बनाए । यस क्रममा गान्धीले १७ पटकसम्म भोक हड्ताल गरे । स्वतन्त्रताका योद्धा भगत सिंहले पनि जेल बस्दा निकै लामो भोक हड्ताल गरे । यस्ता अहिंसात्मक तरिकाबाट गरिएका विरोधले अन्त्यतः बेलायती इष्ट इण्डिया कम्पनीले भारतमाथिको आफ्नो स्वामित्वको अन्त्य ग¥यो । स्वतन्त्रतापछि भारत र पाकिस्तानको विभाजन भयो र हिन्दु र मुसलमानहरूबीच दंगाको सुरुवात भयो जसमा लाखौंको संख्यामा मानिसहरूको मृत्यु भयो ।
पाकिस्तानको अंशमा परेको ७५ करोड रुपैयाँमध्ये ५५ करोड तिर्न बाँकी रहेको बेलामा भारतको स्वामित्व मानिएको कश्मिर क्षेत्रमा पाकिस्तानले कब्जा गरेकोले भारतले सो रकम दिनु नहुने आम धारणा थियो । तर, महात्मा गान्धीले उक्त रकम तिरेर धार्मिक दंगा रोक्नुपर्ने भन्दै भोक हड्ताल सुरु गर्नुभएको थियो ।
प्रायजसो क्रुर शासकहरूको विरुद्ध संसारभरी भोक हड्तालहरू भएका छन् । नेपालमा राणा शासनका विरुद्ध बीपी कोइरालाले २९ दिनसम्म बन्दी गृहमानै भोक हड्ताल गर्नुभएको थियो । ०२९ सालतिर पञ्चायतका नेता सूर्यबहादुर थापाको भोक हड्ताल पनि चर्चित छ । ०४६ पछि अनेक मानव अधिकारवादीहरूले भोक हड्ताल गरेका थिए फरक प्रसंगमा । जब अन्यायले ग्रस्त समाजमा मानवीय संवेदना र अधिकारको कुनै सुनुवाइ हुँदैन, केही दृढ व्यक्तिहरूले सम्पूर्ण समाजको निम्ति यस्ता आन्दोलन सुरु गर्दछन् । कति सफल हुन्छन् कति असफल ।
भोक हड्ताललाई विरोधको अन्तिम अस्त्रका रूपमा लिइन्छ । सुनुवाइ नभएको खण्डमा सत्याग्रहीको ज्यान नै जाने गर्दछ । यसका निम्ति ठूलो साहसको आवश्यकता पर्दछ भने यसले आम सर्वसाधारणको ध्यान खिच्न सफल हुन्छ । जब कोही न्यायको खोजीमा आफ्नो ज्यानकै बाजी लगाउन तत्पर हुन्छ, त्यो पनि अहिंसाको माध्यमबाट, त्यसको पछाडि गहिरो वैचारिक पृष्ठभूमि र मानवीय संवेदना रहेको विश्वास गर्न सकिन्छ । समर्थकहरूको साथ पाएपछि सत्याग्रहीहरू थप दृढ हुँन्छन् र आफ्नो संकल्पबाट डग्मगाउँदैनन् ।
शारीरिक परिर्वतन र क्षमता :
भोक अड्तालको क्रममा शरीरमा के के हुन्छ भन्ने बारे कुरा गरौँ । हाम्रो शरीरलाई क्रियाशील राख्न ठोस तथा तरल पदार्थको आवश्यकता पर्दछ । भोक हड्तालमा कसैले खाना खाँदैनन् भने कसैले पानीसमेत पिउँदैनन् । जब शरीरले खाना र पानी पाउन छोड्छ, अत्यावश्यक तत्वहरूको कमी हुन थाल्छ । पोटासियम र महŒवपूर्ण इलेक्ट्रोलाइटहरूको अभावमा स्नायु प्रणली वा नर्भस सिस्टम कमजोर हुन थाल्छ । कमजोर स्नायु प्रणालीले गर्दा तिर्खाको अनुभूति पनि हुँन छोड्दै जान्छ । खाना र पानीको कमीले शरीरको बोसो र मासु घट्दै जान्छ ।
भोको रहेको तीन दिनमै कलेजोले विस्तारै शरीरको बोसोलाई टुक्राउन थाल्छ । यसलाई किटोसिस् भनिन्छ । शरीर सकेसम्म कम शक्तिमा सञ्चालन हुन त थाल्छ तर त्यो थोरै शक्ति पनि उत्पादन गर्ने पदार्थ शरीरमा नआएपछि बिस्तारै कलेजोले आफ्नै शरीरको मासुको उपयोग गर्न थाल्छ । मासु पनि सकिँदै गएपछि आन्तरिक अंगहरू उपयोग गर्ने बाध्यता हुन्छ र यसै क्रममा भित्री अंगहरूले काम गर्न छोड्दै गएपछि व्यक्तिको ज्यान नै जान सक्छ । बाहिरी शरीरमा पनि केही संकेतहरू देखिन थाल्छन् । छालामा मैनजस्तो पदार्थ देखिन थाल्छन् भने शरीरबाट अमिलो खालको गन्ध आउन थाल्छ । किटोसिसको क्रममा विषालु पदार्थहरू उत्पादन हुने गर्दछन् जुन सामान्यतः पिसाबबाट निकालिन्छ ।
तर, पानीको कमीका कारण त्यो राम्ररी निस्कन नपाएपछि किटोएसिडोसिस हुन्छ र ज्यान जान सक्छ । शरीरमा पानीको अत्यधिक कमी हुँदा अनि मासु र भित्री अंगहरूको खपतबाट चलेको शरीर अन्ततः किड्नी र लिभरले काम गर्न छोडेपछि मृत्यु हुन्छ ।
कति समयसम्म भोकै बस्न सकिन्छ भन्ने कुरा हड्ताल बस्ने मानिसको शारीरिक अवस्थाले निर्धारण गर्छ । पानी वा अन्य गुलियो तरल पदार्थ पिएको खण्डमा भोक हड्ताल केही लामो जानसक्छ । सामान्यतः शरीरमा बोसो र मासु कति छ त्यसले फरक पर्छ भने उमेर तथा अन्य रोगहरू भए नभएको कुरा पनि महŒवपूर्ण हुन्छन् । महात्मा गान्धी ७० वर्षभन्दा बढी हुँदा २१ दिनससम्म भोकै बस्नसक्नु भयो भने सामान्यतः मानिसहरू दुई हप्तामा शारीरिक जटिलता महसुस गर्न थालेर विरोध रोक्छन् । जब भोक हडताल तोड्न, प्रशासनले जबरजस्ती नाकमुखबाट पाइपमार्फत खाना वा पानी खुवाउन खोजे, वायुनली हुँदै फोक्सोमा पुगेर मृत्यु नै हुन्छ ।
नेपालमा पनि डा. केसीले १९आंै सत्याग्रह जुम्लाबाट सुरु गरी हाल शिक्षण अस्पतालमा रहनु भएको छ । उहाँको माग सबै नेपाली जनताका लागि हो भन्नेमा कुनै शंका छैन तर सरकार भने उदासीन देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका केही माफियाहरूको स्वार्थ रहेका कारण डा. केसीका मागहरूमा सुनुवाइ नभएको कुरा बुझ्न कठिन छैन । जुम्लामा मृत्युवरण गर्न तत्पर डा. केसी काठमाडौं आएपछि जसरी उहाँलाई वीर अस्पताल लान खोजियो त्यस बेलाको घटनाले जनता निकै आक्रोसित भएका थिए । यस्ता सामाजिक परिर्वतका लागि सत्याग्रहको बाटोमा लागेका देशको सपूतलाई समर्थन गर्नु सबैको कत्र्तव्य हो ।क
(भण्डारी नक्सा प्रा.लिका सहसंस्थापक र पाठक नेपाल पानी सदुपयोग फाउण्डेसनमा अनुसन्धानकर्ता तथा अमृत क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)
अघिल्लो लेख डिपिएल निर्धारित समयमा नहुने
पछिल्लो लेख फिल्म मेकअप स्टुडियोको शुभारम्भ
माग कम भएसँगै कुभिण्डोको मूल्य घट्यो
पुननिर्मित रानीपोखरी उद्घाटन बुधबार
काठमाडौं । बजारमा कुभिण्डोको माग कम भएपछि मूल्य पनि सस्तिएको छ । कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण मठमन्दिरहरु सर्वसाधारणका लागि...